Brauer Baby Kids Liquid Zinc
Brauer Baby & Kids Liquid Zinc သည်သဘာဝအရသာသာမကဘဲ ၁၀၀% သကြားမပါဝင်ပါ။ဇီဝရရှိနိုင်သည့် Zinc ပုံစံဖြင့်ကျန်းမာသောကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပြုသောဗီတာမင်စီနှင့်ဗီတာမင်ဒီတို့၏အကျိုးကျေးဇူးများပါရှိသည်။
Zinc ပါဝင်လို့ ကြီးထွားမှု နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားကောင်းစေပြိး ကိုယ်ခံအားအတွက် ဗီတာမင်စီနှင့် ဗီတာမင်ဒီတို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါသည်။
- အရိုးနှင့် အရေပြားကျန်းမာရေးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
- ကျန်းမာသော ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုထိန်းသိမ်းပေးသည်။
- ခန္တာကိုယ်တွင်းရှိ ပရိုတင်းဓာတ်ပေါင်းစပ်ခြင်းကို ကူညီပေးသည်။
- အရိုးနှင့်သွားများကျန်းမာစွာ ဖွံ့ဖြိုးအောင် ထောက်ပံ့ပေးသည်။
- နှလုံးအစို့နှင့် အာရုံကြော စနစ်၏ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
- ကျန်းမာသော ကိုယ်ခံအားစနစ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
အသုံးပြုနည်း - အသုံးမပြုခင်ကောင်းစွာလှုပ်ပါ။ ဆေးပြွန်လေးကိုကိုအသုံးပြုပြီး အောက်ပါအသက်အရွယ် များအတွက်နေ့စဉ် ၁ ကြိမ်မှ ၂ ကြိမ်တိုက်နိုင်ပါသည်။
၁ - ၃ နှစ် - ၂.၅ mL
၄ - ၈ နှစ်: ၅ mL
၉ - ၁၃ နှစ် - ရ.၅ml (သို့)
At Brauer, we pride ourselves on creating high-quality products for your children. Each of our oral liquids has been formulated with premium ingredients and flavour combinations they'll enjoy, without any artificial colours, flavours or sweeteners. We know that beingaparent can be tough.
Brauer Baby Kids Liquid Vitamin C
ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အထူးမြင့်တင်ပေးပြီး Vitamin C က ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာသောခန္တာကိုယ် ရရှိအောင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
Brauer Baby Kids Liquid Multivitamin
Brauer Liquid Multivitamin သည် ကလေးငယ်တိုင်း ကျန်းမာခွန်အားပြည့်ပြိး ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုအားကောင်းစေပါသည်။